Homeसमाचारअघोरी बाबाको डिभोर्स भएको हो ? भिडियोमा हेर्नुहोस् अघोरी बाबाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
January 16, 2021 admin समाचार 6970
अघोरी बाबा र उनको अमेरिकन श्रीमतीको वि’बाहको बारेमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के उनको बैबाहीक स’म्बन्धको बारेमा वास्त’विक कुरा सबैलाई थाहा छ त ? अघोरी बाबाले आफ्नो कुरा खुलेर राख्ने गर्दछन् । उनले आफ्नो वि’बाहको कुरा र अमेरिकी ग्रिन कार्ड त्याएर आफ्नालागी आएकी श्रीमतीको बारेमा पनि खुलेरै कुरा गरेका छन् । वि’बाहपछि पनि उनले आफ्नो श्रीमतीसंग धेरै मिडियामा खुलेरै अन्त’रवार्ता समेत दिएका छन् ।
तर तीनै अघोरी बाबाको ग्रीन कार्ड छाडेकी श्रीमती’संगको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,‘को अमेरिका ? कस्तो अमेरिका ? मेरोलागी यही बन’पाखा र याहाँको माटो नै भरिपुर्ण छ । मलाई अरुलाई जस्तो चिल्लो गाडी र ठूलाठूला महल चाहिएको छैन ।’ जब अघोरी बाबाले यस्तो जवाफ दिए तब उनको यो भनाईबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि उनको आफ्नो श्रीमतीसंगको सम्ब’न्ध राम्रो रहेनछ भन्ने कुरा ।
प्राय सबै कुरा खुलेरै भन्ने अघोरी बाबाले यो कुरामा भने घुमाउरो पाराले ज’वाफ दिएका छन् । केहि समय अघि ‘लाइफ ड्यामेज’ भन्दै युवा माझ चर्चित बाबाले विवाह गरेको भन्दै सि’न्दुर लगाकी आफ्नी जिवनसाथीलाई पनि सा’र्वजनिक गरेका थिए । अवको बाँकि जिवन आफुहरु दुःख सुखकासाथ काट्न तयार रहेको बताउदै आफुहरु एक भएको उनीहरुले बता’एका थिए ।
परिवार, समाज परिवर्तनमा आफुहरुको बिवाह उदाहरण बन्ने भन्दै समाजमा गल’त काम गर्नेहरुमाथी आफ्नो विवाहले शिक्षा दिने पनि दम्पतीको भनाई थियो । आफ्नो डयामेज भएको लाईफ म्यानेज भएको पनि बाबाले बताएका थिए । एक अन्त’रवार्तामा उनले देशको राजनीति र नेताहरुले कुर्सी’कोलागी गरेको फोहोरी खेलको विषयलाई जोडेर आफुलाई आफ्नै देश मन पर्ने बताएका छन् ।
उनलाई पटक पटक श्रीम’तीसंगको कुरा सोध्दा पनि उनले देशको वर्तमान परिस्थितिकै विषयमा बढी बोली रहे । देशको राज’नीतिक परिस्थितिको उदाहरण दिंदै अघोरी बाबाले आफ्ना धेरै कुरा उनका फ्यान र नेपाली जन’तालाई बताई दिएका छन् । उनले भनेका कुरा उनैको मुखबाट सुन्नकोलागी तलको भि’डियोमा क्लिक गर्नुहोस् । – ओएस नेपालबाट
May 3, 2021 admin समाचार 5724
February 7, 2021 admin समाचार 6458
June 7, 2021 admin समाचार 4217